Semalt: Indlela yokwenza okusetyenziswe kwe-Wikipedia App xa ungaxhomekekanga
Nangona ukuxhamla kwedatha ephezulu kakhulu kubonakala kuyo yonke indawo, kusekho indawo ezingenako ukuxhomekeka nakwili xesha. Ezinye iindawo zinoxhumano olunzulu, ngoko kufuneka usebenze kunye ne-bandwidth eyancitshiswa kakhulu kwezinye iindawo. Umzekelo omhle kakhulu xa uhamba ngomoya okanye xa uphesheya.
Kwiimeko zombini, unokufuna ukugcina amaphepha amaninzi ewebhu ukuze uwafunde emva koko ifowuni yakho iya ku-intanethi. U-Ivan Konovalov, u-10 (Semalt) uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi kukho ii-Wikipedia zokusebenza ze-Android kunye ne-iOS ezivumela abasebenzisi ukuba balondoloze amanqaku anokufumaneka emva kokungaxhunyiwe kwi-intanethi.
Ho ukugcina iphepha kwi-Android
Thepha amacatshu amathathu aphezulu kwikhoneni eliphezulu lasekunene kwesikrini. Oku kusebenza njengenkinobho yemenyu
Khetha "Gcina ikhasi" ukusuka kwoluhlu lweenketho eziza kubonakala.
Indlela yokufumana amanqaku alondoloziweyo kwi-Android
Yiya kwimenyu enkulu kwaye ukhethe "Amaphepha alondoloziweyo".
Indlela yokugcina iphepha kwi-iOS
Kuphela kufuneka uthayiphe uphawu lweentliziyo phantsi kwinqaku kwaye ligcinwe. Oku kulula nokuba mfutshane.
Indlela yokufumana amanqaku alondoloziweyo kwi-iOS
Zombini iinguqulelo ze-app ikuvumela ukuba uhlaziywe inqaku kunye nomxholo wakutshanje xa uxhumano lwakho lubuyiselwe. Kodwa ke, i-Android version inenye inzuzo ngaphezu kwe-iOS version ye-app. abasebenzisi ukukhangela ngamaphepha alondoloziweyo.
Nangona unxibelelwano, kukho izizathu ezimbalwa usenokukhetha ukufunda amanqaku alondoloziweyo kwimodi engaxhunyiwe kwi-intanethi. Ikhululekile kuzo zonke iintlobo zokuphazamiseka. Xa udinga ukugxininisa, izaziso ezifana ne-SMS ezayo, iifowuni, umyalezo we-Twitter kunye nabanye banokuphazamisa kakubi, banciphise uxinzelelo lwakho, kwaye unciphise izinga lokufunda. Esinye isizathu kukuba ukuhlaziywa kwekhasi kuza kubhala ngaphezulu kunye nomxholo okwangoku. Oku kuthetha ukuba ungaphuthelwa ulwazi olubalulekileyo kwiphepha elondoloziweyo.
I-Wikipedia engaxhunyiwe kwi-intanethi kufuneka yenziwe ngendiza yendiza. Ngoko, kuxhomekeke kwithuba elide eliya kuthatha uhambo lwakho kunye nokukhawuleza ukufunda kwakho, ungagcina iphepha elaneleyo eliza kukugcina lixakeke kulo lonke uhambo lwakho ukuba unomfundi okhulayo.
Ukungaxhunyiwe kwi-intanethi kugcina ibhetri yesixhobo sakho. Oko kuthetha ukuba ungafunda amanqaku amaninzi ngaphambi kokuba ibhetri yakho igxothwe ngaphandle kwimodi engaxhunyiwe kwi-intanethi kunemo ye-intanethi. Kwabafundi banokusebenzisa amaxwebhu angaphandle kwama-Wikipedia.
Njengomfundi, unokwenza uphando kwi-Wikipedia kwaye ulondoloze onke amaphepha afanelekileyo. Kungakhathaliseki ukuba unxibelelwano okanye cha, kungcono ukutshintsha idilesi yakho kwimodi engaxhunyiwe kwi-intanethi njengoko kufuneka uxinzelelo lwama-100% ukufundwa nokugawula onke amaphepha alondoloziweyo. Kusenokwenzeka ukuba ufanele usebenzise amanqaku abalulekileyo ngelixa ufunda amaphepha. Ngelishwa, uninzi lwabantu aluqapheli olu hlobo lwe-app ye-Wikipedia okwamanje Source .